အော်တို CPU ကို Cooler Master | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အသုံးအဆောင်များ Apps ကပ » အော်တို CPU ကို Cooler Master
အော်တို CPU ကို Cooler Master APK ကို
အော်တို CPU ကို Cooler Master တဲ့ professional အပူချိန်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ် App ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကို detect နှင့်သင့်ဖုန်းကိုချအေးကြောင်းမိုးသည်းထန်စွာသယံဇာတနှင့် CPU အသုံးပြုမှုစားသုံး apps များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုပိတ်။ သင့်ရဲ့ device ကိုအပူပြဿနာများနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်ရန်မလိုအပ်ပါဘူး။ သင့်ရဲ့ device ကိုစွမ်းဆောင်ရည်အကောင်းဆုံး Keep ပြီးတော့လွယ်ကူခြင်းနှင့်နှစ်သိမ့်နှင့်အတူ multitasking ပျော်မွေ့။ ဒါဟာပြီးပြည့်စုံသောထုံးစံ၌။ ဒါဟာ RAM ကိုတက်လွတ်မြောက်, သင်၏ဖုန်းကိုချအေး၎င်း၏မြန်နှုန်းပိုကောင်းအောင် app ကိုနောက်ခံအပြေးရပ်များနှင့်ဘက်ထရီသက်တမ်းတိုးပွားစေပါသည်။
•လွန်ကဲစွာပူ Apps ကပကို detect သူတို့ကိုသတ်ပစ်
•အပူများအတွက်အကြောင်းမရှိဆုံးဖြတ်ရန် CPU အသုံးပြုမှုကိုပိုင်းခြားသုံးသပ်ပြီး
အဘယ်ကြောင့်ငါ့ဖုန်း Device ကို overheat သနည်း?
တစ်ချိန်တည်းမှာနောက်ခံများလွန်း apps များ running သင့်ရဲ့ device ကို overheat ဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။ မြင့်မားသောဖုန်းကိုအပူချိန်ဖုန်းရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုသက်ရောက်သည်။ ဒါဟာမြင့်မားတဲ့ CPU အသုံးပြုမှုနှင့်အတူ apps များကို detect နှင့်သင့်ဖုန်းကိုအေးမြစေခြင်းငှါသူတို့ပိတ်။
သင်သည်ထိုသူတို့ပိတ်လိုက်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ဖုန်းရဲ့ CPU အသုံးပြုမှုစောင့်ကြည့်ဖို့ဒီဇိုင်းနှင့်မြင့်မားသော CPU အသုံးပြုမှုနှင့်အတူ apps များ detect ဖြစ်ပါသည်
သငျသညျ, ရှုပ်ထွေး app များကို အသုံးပြု. ဗီဒီယိုကိုကြည့်, ဒါမှမဟုတ်သင်ကအားသွင်းနေစဉ်အခါသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုပူရဖို့အတှကျဒါဟာပုံမှန်ပါပဲ။ ထိုကဲ့သို့သောကိစ္စများတွင်ကိုယ့်သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုတစ်နေရာရာမှာအအေးနှင့်လေဝင်လေထွက်ထားအပူချိန်မကြာမီ drop သငျ့သညျ။
3.08 ကို MB
ZNP Labs က